Birta calanka ee dhererkeedu ahay 66 fuudh waxaa laga taagay koonaha Bush iyo Mendota dhinaca dhismaha maamulka ( Dhismaha 21) Sebtambar 1941. Bishii Oktoobar 4, 1941, Naadiga 3M waxa uu kafiishay xaflada calan saarka. Calanku waxa uu dul babadday…
3M waxay si joogta ah u horumarisay mishiino iyo Teknoolajiga si loo horumariyo, loo soo saaro, oo loo iibiyo alaabteeda. Taas ka sakow, waxay ku tiirsanayd dadkeeda si shaqada loo sameeyo. Qaar ka mid ah shaqooyinka in dheeraad ah ma jiraan ama…
Qaraxa: Ka jawaabida Masiibada 3M
Waxay ahayd, 12 darajo F, saacada 8:20 Subaxnimo Febraayo 8, 1951, marka qaraxu uu gilglay dhismaha macdanta ee lixda dabaq ( Dhismaha 12). Waxay burburiysa labba dabaqa, iyaddoo mugdi gelisay, waxyeelaysay warshada cabbaynta xabagta duubka ah ee ku…
Xabagta “Scotch” Si loo Badbaadiyo Janaraal Grey
Maayo 5, 1943, Brig. Gen. Carl R. Gray, Jr., head of U.S. Hawl galada khadka tareenka ee Waqooyiga Afrika, waxay codsi u soo direen Guddoomiyaha William L. McKnight: Fadlan soo dir “Xabagta Khafiifka ah ee Scotch, , 3/4 x 2592 hiish, Khafiid, 3-…
“Scotch” oo ah magaca summada xabagta 3M waxaa la rumaysanyahay inay ku leedahay asalkeeda rinjiilaga baabuurta oo aan faraxsanayn kaas oo isticmaalayay xabagta qaybta aan la rinjiyaynayn lagu xidho ee 3M. Waxay ugu dhegatsay si sax ah sababtoo ah si…
3M, Arrinka Qoyska
La kullan 3Mer oo inta badan waxaad heli doontaa in isaga ama iyaddu uu leeyahay xubnaha qoyska kuwaas oo ka shaqeeya 3M, qayb ka mid ah dhaqanka dheer ee 3M. Otto Meissner waxa uu ahaa tusaalaha ugu muhiimsan. Isagoo ku noolaa 668 Greenbrier, in…
“Ka shaqaynta macdanta”
3M waxay u taagantahay Shirkada Macdan iyo Warshadaynta Minnesota. Laga reebo dedaalka xadidan ee lagu soo qaadanay korondhamka heerka hoose ah Crystal Bay, Minnesota, ee baaleeska 1945, shirkadu may samayn wax macdan qodis ah. Taas ka sakow,…
Maaraynta biyaha Roobka Jiilka Labbaad
By Saint Paul Port Authority
Safaynta Biyaha Daadka Maaraynta biyaha roobka socda waxay muhiim u tahay qorshaynta magaalada iyo daryeelka deegaanka. Goobta Beacon Bluff waxay ku sii daysaa biyo aaga ah ugu dhowaan 163 qooddi oo biyaha roobka oo u qulqula dhanka dhuunta dhulka…
Sideen Ku sifaynaa Biyaha Roobka % Biyaha Socda Sidii Khayraad ahaan?
Xarumaha biyaha roobka ee Masuuliyiinta Saint Paul Beacon Bluff Xarunta ganacsiga waxay u sifeeyaan biyaha roobka sidii il loo isticmaalo inay cusboonaysiiyaan biyaha dhulka, waraabiyaan dhulka, siiba kor u qaadaan oo ilaaliyaan deegaanka dabiiciga…